Tanjona Amin’ny Taona 2018 ny Hampivelatra ny Vondro-piarahamonina Runet Echo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2018 5:39 GMT
Sary avy amin'ny RuNet Echo
Tena zava-dehibe ho an'ny fanangonam-baovao an'i Rosia ny taona 2018. Hifidy indray an'i Vladimir Putin ho filoha ny firenena, ao anatin'ny fifidianana mafana izay tsy mahataitra mpifidy loatra, amin'ny firenena tsy manana fomba fijery mazava loatra amin'ny hoavy. Midika ny andiana lalàna vaovao mametra ny fampitam-baovao izay natao hanakendana ny tati-baovao mpitsikera tsy miankina fa voatery hiditra amin'ny fanivanan-tena ny sehatra fampahalalam-baovao ao an-toerana sy ny any ivelany. Misoroka ny lohahevitra mety hampididoza toy ny kolikoly sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ​​indrindra any amin'ireo faritra lavitra ny birao any Moskoa ireo mpitati-baovao avy any ivelany izay miantehitra amin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny Rosiana hahazoany visa ho an'ny asany. Mameno ny tontolon'ny fampitam-baovao ao an-toerana ny sivana sy ny fampielezan-kevitry ny fanjakana. Ary mijanona tsy misy mpitatitra ireo lohahevitra maro, izay tsy mifanaraka amin'ny fitadiavan-dokambarotry “fihazana kitika” ataon'ny fampitam-baovao ankehitriny
Eo indrindra no tena ilaina ny RuNet Echo. Ny hampivelatra ny vondrom-piarahamonina RuNet Echo, ny hisarihana ireo mpanoratra vaovao, amin'ny fanangonam-baovao tsy mifantoka loatra amin'i Moskoa sy ireo lohahevitra tsy dia malaza loatra kanefa tena manan-danja toy ny foko, ny fivavahana ary ireo vitsy an'isa ao Rosia, sy ireo hetsi-panoherana vaovao izay mitranga lavitra an'i Moskoa no tanjonay amin'ny taona 2018.
Ny tanjon'ny RuNet Echo ho an'ny telovolana manaraka dia ny hampitombo betsaka ny isan'ny mpandray anjara amin'ny fomba miavaka sy hampitombo ny vokatra farafahakeliny ho lahatsoratra miisa 4 ka hatramin'ny 6 (tafiditra ao anatin'izany ny fiaraha-miasa amin'ny tonian-dahatsoratra hafa, Advox sns) manan-kalitao isan-kerinandro sy tatitra amin-dohahevitra isankarazany. Ny lahatsoratra dia hifototra amin'ny endriny lava kokoa sy amin'ny fizarana fohy kokoa. Hanao fangatahana sy handray lahatsoratra maro kokoa izahay amin'ny teny Rosiana ary ho adika amin'ny teny Anglisy izany. Hiasa ihany koa izahay mba hisarihana mpanjohy bebe kokoa ho an'ny fantson'ny media sosialin'ny RuNet Echo ary handefa votoaty maro samihafa.
Raha tontosa, ahafahan'ny RuNet Echo manome ny tati-baovao mivaingana, manara-potoana, lalina kokoa, momba an'i Rosia sy lohahevitra izay any ambany loatra amin'ny lisitry ny laharam-pahamehan'ny fampitam-baovao manerantany ity tanjona ity.
Toy izao manaraka izao ny endrikendriky ny tanjona ho tontosain'ny RuNet Echo:
Dingana 1 : Fanaovana antso ho an'ireo mpandray anjara vaovao ao amin'ny media sosialy sy ny fantsona hafa (2 herinandro) ao amin'ny RuNet Echo
Dingana 2 : Fanangànana lisitra fohy amin'ireo kandidà miisa 15 ka hatramin'ny 20 (2 herinandro)
Dingana 3 : Amin'ny alalan'ny fitsapana sy ny hadisoana, ahena fohy 5 ka hatramin'ny 7 ny ny lisitr'ireo mpanoratra mahay sy manan-talenta ary azo itokisana (1 volana).
Dingana 4: Tazomina ny famoahan-dahatsoratra miisa 4 ka hatramin'ny 6 ao amin'ny RuNet Echo (tafiditra ao anatin'izany ny fiaraha-miasa) isan-kerinandro (1 volana)
Horefesinay ny fahombiazanay manoloana ny isan'ny mpandray anjara tsy tapaka ao amin'ny RuNet Echo izay voasarikay rehefa tonga ny faran'ny fotoam-panandramana; amin'ny alàlan'ny isan'ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny RuNet Echo isan-kerinandro; ary koa amin'ny alàlan'ny isan'ireo famoahan-dahatsoratra hafa izay manondro ny RuNet Echo ao amin'ny lahatsoratr'izy ireo.